Roobabka oo Waxyeeleeyay Wadada Laamiga ee Garoowe iyo Bosaso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Roobabka oo Waxyeeleeyay Wadada Laamiga ee Garoowe iyo Bosaso
Roobabka oo Waxyeeleeyay Wadada Laamiga ee Garoowe iyo Bosaso
Madaxweynaha Ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan iyo gollaha wasiiradda Puntland ayaa kormeeray Wadada laamiga ee isku xirta Caasimadda Garoowe iyo magaaladda Bosaso, Wadadaasi oo waxyeelo xoog leh ay u gaysteen roobab maalmaha ka da’ayay Puntland oo sababay Daadad xoog leh.
Waftiga Madaxweyne Kuxogeenka ayaa kormeeray wadada u dhaxaysa Caasimadda Garoowe iyo tuuladda Sin-jiif oo burbur xoog leh soo gaaray, iyadoo labo meelmoodna ay ka go’day wadadu.
Wasiirka howlaha guud iyo gaadiid mudane Axmed Bashiir oo ka hadlay khasaaraha roobabku gaarsiiyeen kaabayaasha iyo shacabka Puntland, waxa uu sheegay in labo meelmood ay goday wadadu inta u dhaxasya sinujiif iyo Garoowe, iyo tuulada Xaaji khayr oo laamigu uu go’ay.
Wasiirku wuxuu kaloo sheegay in roobabku ay dhaawac weyn u gaystay Wadada isku xirta Qardho iyo Bosaso.
Kusimaha Madaxweynaha Puntland Axmed Karaash waxaa uu sheegay in daadadka roobku keeneen bur-bur xoogleh uu ka soo gaaray waddooyinka hal bowlaha ah, kuwaas oo dowladdu u xilsaartay guddi qiimayn ku samayn doona waxyeelada guud ee ka soo gaartay dadka, Xoolaha, Deegaanka iyo Waddooyinka goladada Puntland.
wuxuu sheegay in shacabka Puntland looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dayactirka Waddooyinka bur-buray, waxaana uu tilmaamay in goobaha hadda waxyeelada xoogga leh ay soo gaartay 5 Sano kahor ku dhisteen iskutashi tisqaaday, iminkana si lamida taasi in la joogo wakhtigii ay kaalin tooda ka qaadan-lahaayeen.
Gabagabadii, Madaxweyne ku xigeenku wuxuu tacsi u diray ehelada caruurtii ku dhintay roobabkii iyo daadadkii ka dhacay gobolka Karkaar.